Kitra – Can U17 : omby ny sary famantarana | NewsMada
Kitra – Can U17 : omby ny sary famantarana
Nampahafantarina, tamin’ny fomba ofisialy ny asabotsy lasa teo, tetsy amin’ny efitranon’ny Cnaps Ampefiloha, ny sary famantarana “mascotte”-n’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra na ny (Can 2017), sokajy U17. Fihaonana hatao eto Madagasikara ny 2 – 16 avrily ho avy izao.
Omby, izay efa nahalalana ny ekipam-pirenena malagasy ary harem-pirenen’i Madagasikara izany sary famantarana izany. Tsy mbola manana anarana aloha hatreto, ny sary famantarana fa mbola hanaovana fifaninanana.
Nanambara ny solontenan’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), nanatrika ny lanonana izay mijery ny fandrosoan’ny asa handraisana ity Can ity, fa tsy ny kianja hilalaovana ihany no tokony ho vonona sy hanaraka ny fepetra takian’ny Caf, fa eo dia eo koa ny fisian’ny kianja hanaovana fanazarantena.
Notsiahivin’ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena kosa fa amin’ity herinandro ity dia hisy fivoriana iarahana amin’ny minisiteran’ny Teti-bola amin’ny famoahana ny vola hikarakarana ity Can U17 ity.